अध्यक्षद्वयले राजीनामा दिन गरेको आग्रह तुम्बाहाङफेद्वारा अस्वीकार !
अध्यक्षद्वयले राजीनामा दिन गरेको आग्रह तुम्बाहाङफेद्वारा अस्वीकार !
काठमाडौं - उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेकपाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार पार्टीका दुवै अध्यक्ष, महासचिवसहित नेताहरूकै उपस्थितिमा उनले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएकी हुन्।
उनको प्रश्नपछि महासचिव पौडेलले भने, ‘मैले लेखेको।’ तुम्बाहाङफेले सचिवालय निर्णय फिर्ता लिन महासचिव पौडेललाई आग्रह गर्दै भनिन्, ‘तपाईंले लेखेको त्यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, यसरी तपाईंहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, म राजीनामा दिन्नँ। संविधानले संसद्को सभामुख रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छैन, तपाईंहरूले सभामुख कसलाई बनाउने निर्णय लिनुभयो, त्यो निर्णय पहिले देखाउनुहोस्, छैन भने म राजीनामा दिन्नँ।’
तुम्बाहाङफेले पार्टीले आफ्नो राजीनामाभन्दा पहिले सभामुखको उम्मेदवार को हुने निर्णय लिनुपर्ने र त्यो उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो नाम नभए आफूले के कारणले राजीनामा दिनुपर्ने हो त्यो विषय लिखित रूपमै खुलाएर आफूलाई पत्र दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। छलफलमा तुम्बाहाङफेले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘तपार्इंहरूले त्यसरी निर्णय दिनुभएन भने म संसद् चलाउँछु प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु।’
आइतबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री खासै बोलेनन्। उनले नीतिगत रूपमा सभामुख चयनका लागि नेकपाले उक्त पद छाड्न नसक्ने धारणा मात्र राखे। अन्य नेताले सचिवालय निर्णयलगायत विषयमा तुम्बाहाङफेसँग सवाल–जवाफ गरेका थिए। उनले आफ्नो अडान दोहोर्‍याई नै रहिन्।
अध्यक्ष दाहालले भने तुम्बाहाङफेलाई अहिले राजीनामा दिएर बाटो खोल्न आग्रह गरेका थिए। ‘अहिले अन्य किसिमले नसोच्नुहोस्, कुनै व्यक्तिका नाममा छलफल भएको छैन। बाहिर कहाँ के–के आएका छन्, त्यो सरोकारको विषय होइन। पहिले उम्मेदवारी सुनिश्चितता त्यसपछि मात्र पात्रका विषयमा छलफल गर्ने हाम्रो सोच हो,’ उनको भनाइ थियो।
तर तुम्बाहाङफे लचक हुने संकेत नदेखेपछि संसद् बैठक एक साता स्थगित गराउन अध्यक्षद्वयले निर्देशन दिएका थिए। ओली–दाहालको निर्देशनलगत्तै संसद् बैठक तेस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो।
बालुवाटारमा नेकपा नेतासँगको छलफलपछि सिंहदरबार पुगेकी उनले आफूले सभामुख को हो भन्ने प्रश्न राख्दा नेताहरूले जवाफ दिइनसकेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। ‘मैले पहिले सभामुख को हो ? सभामुख रिक्त राख्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूसँग कुरा गरें। जवाफ आएन। मेरा कारणले सभामुख नेकपाले गुमाउनु हँुदैन भन्नेमा म सचेत छु,’ उनले भनिन्।
उपसभामुखले राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि नेकपाभित्र सभामुख चयन झन् पेचिलो बनेको छ। सभामुखका लागि नेकपाभित्र सुवास नेम्बाङ, तुम्बाहाङफे, अग्नि सापकोटा र पम्फा भुषाललगायतको नाम चर्चामा छ। उपसभामुखले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याएपछि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच आइतबार छलफल भएको छ।